အမှတ်တရလေးများ: သြဂုတ်လအတွက် ယာနယာဉ်ဆီဘိုး အလှူရှင်များစာရင်း-
မင်္ဂလာပါရှင်-မေတ္တာရှင်ဖောင်ဒေးရှင်း ၊စစ်ကိုင်းတောင်ရိုးဆွမ်းလောင်းအသင်းအနေနဲ့ စစ်ကိုင်းတောင်ရိုးရှိသံဃာတော်နှင့် ကိုရင်လေးများ စစ်ကိုင်းမြို့ပေါ်သို့ ဆွမ်းခံကြွရာတွင် အဆင်ပြေစေနိုင်ရန်အတွက် နိုင်ငံတကာအလှူရှင်များမှ ယာနယာဉ်တစ်စီးကို စုပေါင်း လှူဒါန်းခဲ့ကြပြီး ယာနယာဉ်အတွက် လစဉ်ကုန်ကျမည့် ဒရိုင်ဘာလခ နှင့် ဆီဘိုးကို အောက်ပါ အလှူရှင်များမှ လစဉ်လှူဒါန်းလျှက်ရှိနေကြပါကြောင်း ကျေးဇူးတင်စွာဖြင့် မှတ်တမ်းတင်လိုက်ရပါတယ်ရှင်။လစဉ်ယာနယာဉ်ဆီဘိုးအလှူရှင်များစာရင်း-၁. မအင်ကြင်းသန့်(စင်္ကာပူ) S$10၂. မခင်ကလျာစိုး(စင်္ကာပူ) S$20 (Jul,Aug)>၃. ZYL & KPS(စင်္ကာပူ) S$10 (Aug,Sep,Oct,Nov,Dec)၄. ကိုမင်းသူရိန်+မသဇင် မိသားစု(စင်္ကာပူ) S$10၅. ကိုစိုးနိုင်ဝင်း+မလဲ့လဲ့နှင်း(ရွှေဘို)ု(စင်္ကာပူ) S$10၆. ကိုဖိုးကျော်+မမီးငယ်(စင်္ကာပူ) S$10၇. ဦးအောင်သိန်း+ဒေါ်မြင့်မြင့်ဦး မိသားစု(စင်္ကာပူ) S$10၈. ဦးအောင်စိုး+ဒေါ်ခင်ထားအေး မိသားစု(စင်္ကာပူ) S$10၉. ကိုဇော်ဝင်းထွဋ်+မနှင်းယုယုဝင်း၊သမီးလေး-အေးချမ်းပွင့်ဖြူ မိသားစု(စင်္ကာပူ)၁၀. ဗိုလ်ကြီးဥာဏ်ဝင်းထွန်း+မအေးသန္တာထွန်း(စင်္ကာပူ) S$10၁၁. ကိုအောင်စေမင်း+မသင်းလဲ့ရီမောင်(စင်္ကာပူ) S$ 50၁၂. ကိုထင်အောင်စိုး+မလဲ့လဲ့ဝင်း(စင်္ကာပူ) S$10၁၃. မမေဖုန်းသော်(စင်္ကာပူ) S$10၁၄. ဦးအောင်သာကျော်+ ဒေါ်သန်းသန်းဆွေ (စင်္ကာပူ) S$10၁၅. ကိုဇော်ဝင်းမြင့် + မတင်ဇာပိုင် မိသားစု (စင်္ကာပူ) S$10၁၆.မမိုးမိုးနိုင်(USA) ၂၀၀၀၀ ကျပ်၁၇.ကွယ်လွန်သူဖေဖေဦးကံသိမ်းအားရည်စူး၍ ကျန်ရစ်သူမိသားစု၏ အလှူ(၆၅၀၀ ကျပ်)---------------------------------------------------------------------------------------သြဂုတ်လအတွက်စုစုပေါင်း အလှူငွေ= S$ 240 ( ၁၆၅,၁၀၀ ကျပ်)+(၂၆,၅၀၀ ကျပ်)=၁၉၁,၆၀၀ ကျပ်--------------------------------------------------------------------------------------ကျေးဇူးတင်စွာဖြင့်-၀ါဝါခိုင်မင်း'
စေတနာတွေ ဝေဒနာဖြစ်ရတဲ့အခါ (စပယ်ဖြူ)
သူနာပြူ မိခင်ကြီး ဖလော့ရန့်နိုက်တင်ဂေးရဲ့မွေးနေ့ မေလ (၁၂)ရက်နေ့၊ အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာ သူနာပြုနေ့ အထိမ်းအမှတ်အဖြစ် စာတစ်ပုဒ်ရေး လိုက...
Interviewed with Old General who running restaurant
ထမင်းရောင်းနေတဲ့ ဗိုလ်ချုပ်ဟောင်း ဦးလွန်းမောင် မေခ| May 16, 2013 | အရင်က ဗိုလ်ချုပ်လွန်းမောင် အခု ဦးလွန်းမောင် (ဓာတ်ပုံ – ဧရာဝတီ) စစ်စွပ်ကျယ်၊ ပုဆိုးခါးတော...
Number of View: 174 ဆက်စပ်ပို့စ်များ ။ မြသွေးနီရဲ့သူငယ်ချင်းအိုင်ရင်း အိုင်ရင်းရေးသောစာများ (၁) ဆန္ဒနဲ့ဘ၀တစ်ထပ်ထဲကျကြပါစေ။